Toeran'ny fanatrehan'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-04 > Toeran'ny fanatrehan'Andriamanitra
Rehefa namakivaky ny tany efitra ny Isiraelita dia ny tranolay no ivon'ny fiainany. Ity lay lehibe ity, miangona arakaraka ny torolàlana, dia mirakitra ny Masina Indrindra, toerana anatiny fanatrehan'Andriamanitra eto an-tany. Eto no niharihary tamin'ny rehetra ny hery sy ny fahamasinana, miaraka amin'ny fanatrehana mahery vaika ka ny mpisoronabe ihany no avela hiditra indray mandeha isan-taona amin'ny Andro Fanavotana.
Ny teny hoe "tranolay" dia vola sandoka vaovao ho an'ny tranolay (tranolay fanambarana), izay antsoina hoe "Tabernaculum Testimonii" (tranolay fanambarana masina) ao amin'ny Baiboly latina. Amin'ny fiteny hebreo dia fantatra amin'ny anarana hoe "fonenana" Mishkan amin'ny hevitry ny fonenan'Andriamanitra ety an-tany.
Nandritra izany fotoana izany, nisy Isiraelita iray nanana ny tranolay masina teo amin'ny masony. Fampahatsiahivana hatrany fa teo Andriamanitra niaraka tamin'ny zanany malalany. Nandritra ny taonjato maro dia tao amin'ny olona ny tranolay masina mandra-panaon'ny tempoly tao Jerosalema. Io no toerana masina mandra-pahatongan'ny fotoana nahatongavan'i Jesosy tety an-tany.
Ny sasin-tenin’ny Bokin’i Jaona dia milaza amintsika hoe: “Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra tahaka ny Zanaka Lahitokan’ny Ray, feno fahasoavana sy fahamarinana.” (Jaona. 1,14). Ao amin'ny lahatsoratra tany am-boalohany, ny teny hoe "toby" dia midika hoe "velona". Azo adika toy izao ilay andinin-teny: “Izy no teraka ho lehilahy ka nitoby teo amintsika”.
Tamin'ny fotoana nahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao tamin'ny naha olombelona antsika dia nitoetra teo amintsika ny fanatrehan'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Tampoka eo dia mitoetra eo amintsika Andriamanitra ary nifindra tao amin'ny manodidina anay. Ny fomba fanao amin'ny andro taloha, izay tsy maintsy nodiovin'ny olona madio ara-pomba mba hidirana eo anatrehan'Andriamanitra, dia efa lasa taloha. Rovitra ny efitra lamba ao amin'ny tempoly, ary eo amintsika ny fahamasinan'Andriamanitra fa tsy lavitra, voatokana ao amin'ny fitoerana masin'ny tempoly.
Midika inona izany ho antsika ankehitriny? Inona no dikan'ny hoe tsy mila miditra amin'ny tranobe hihaona amin'Andriamanitra isika fa tonga homba antsika Izy? Jesosy dia nanao io dingana voalohany io nanatona antsika ary ankehitriny dia Immanuel - Andriamanitra miaraka amintsika.
Amin'ny maha-vahoakan'Andriamanitra antsika dia ao an-trano isika ary any an-tsesitany miaraka amin'izay. Mandeha tahaka ny Isiraelita tany an'efitra isika, satria fantatsika fa ny tena fonenantsika, raha lazaiko izany, dia any an-danitra amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra dia mitoetra eo afovoantsika.
Amin'izao fotoana izao dia eto an-tany ny toerana sy fonenantsika. Jesosy dia tsy fivavahana, fiangonana na fananganana teolojia fotsiny. Jesosy no Tompo sy Mpanjakan'ny fanjakan'Andriamanitra. Nandao ny tranony i Jesosy mba hitady trano vaovao ao amintsika. Ity no fanomezana ny Fahatongavana ho nofo. Tonga iray amintsika Andriamanitra. Ny Mpamorona dia nanjary ampahany tamin'ny zavatra noforoniny, miaina ao amintsika izy ankehitriny sy mandrakizay.
Tsy mipetraka ao amin'ny tranolay masina intsony Andriamanitra ankehitriny. Amin'ny alalàn'ny finoana an'i Jesosy izay iombonanao hevitra dia miaina ao aminao ny fiainany. Nahazo fiainana ara-panahy vaovao tamin'ny alàlan'i Jesosy ianao. Izy ireo dia ny lay, ny lay, ny lay, na ny tempoly izay hamenoan'Andriamanitra ny fanatrehany amin'ny alalanao miaraka amin'ny fanantenany, ny fiadanany, ny fifaliany ary ny fitiavany.